February 2021 - MinSayYar
ext ပြည်တွင်းသတင်း ဗဟုသုတ
ဆန္ဒပြကြသူတွေကို ကာကွယ်ဖို့ Defense တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် ဗားကရာလမ်းပေါ်က သင်ခန်းစာ ! ဒီနေ့ ဗားကရာလမ်း ဆန္ဒပြပွဲမှာမနက်တစ်ပိုင်းလုံးကတော့ ဆန္ဒပြသူတွေ လုပ်ကြတာက လူစုပြီး အော်မယ်။ ရဲတွေ ပြေးတက်လာရင် ပြေးမယ်။ ရဲတွေ ငြိမ်သွားရင် လူပြန်စုမယ်။ ဆက်အော်မယ်။ ဒါကိုပဲ ထပ်ခါ ထပ်ခါ လုပ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ့် လူထု ခံစစ် (defense) ကို စ တာက ညနေ ၂ နာရီ ဝန်းကျင်မှာပါ။ သူတို့လုပ်တဲ့ပုံစံက . . ရှေ့ဆုံးတန်း – ဒိုင်းတွေ ကိုင်တဲ့ လူငယ်တွေ ရှိတယ်။ ဒုတိယတန်း – မီးသတ်ဆေးဗူး ကိုင်ထားသူ / ရေစိုဝတ် ကိုင်ထားသူ / […]
Unicodeအိမ်တော်ရာစေတီတော်မြတ်ကြီးနှင့်အရံစေတီတို့မှအလင်းတန်းများထွက်ပေါ်ခြင်းနှင့်ဘုရားဝင်းအတွင်းရှိဝသုန္ဒြေနတ်ရုပ်တုမှရေစက်ရေပေါက်များကျခြင်းဖြစ်ပေါ်မန္တလေးမြို့၊ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊သီရိဟေမာအရှေ့ရပ်ကွက်၊၂၇x၂၈လမ်းကြား၊၈၈x၈၉လမ်းကြားရှိပုဂံမင်းတည်ထားကိုးကွယ်တော်မူခဲ့သောမဟာလောကရံသီအိမ်တော်ရာစေတီတော်မြတ်ကြီးနှင့်အရံစေတီဒီဇင်ဘာလ၂၉ရက်နေ့(နတ်တော်လပြည့်နေ့)မွန်းလွဲပိုင်းကအလင်းတန်းများထွက်ပေါ်ခြင်း၊ဝသုန္ဒြေနတ်ရုပ်တု၏ဆံပင်အဖျားမှရေစက်ရေပေါက်ကျခြင်းများထူးခြားတိုက်ဆိုင်စွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ”ဂေါပကရုံးကလျှပ်စစ်အကူဝန်ထမ်းဦးရဲဝင်းအောင်ကထမင်းစားဖို့အိမ်ပြန်စဉ်မှာဝသုန္ဒြေနတ်ရုပ်တုအောက်ခြေမှာရေအိုင်နေလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာရုပ်တုရဲ့ဆံပင်အဖျားကနေရေစက်ရေပေါက်တွေအောက်ကိုကျနေတာစတင်တွေ့ရှိလို့ကျွန်တော့်ဆီအကြောင်းကြားပါတယ်။ နောက်ပြီးဂေါပကအဖွဲ့ဥကကဋ္ဌကနေတဆင့်ဆရာတော်ကြီးများထံဆက်လက်လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်”ဟုဂေါပကအဖွဲ့ရုံးအဖွဲ့မှူးဦးညွန့်မြိုင်ကပြောကြားသည်။အဆိုပါဝသုန္ဓြေရုပ်တုသည်ဘုရားဝင်းအတွင်းပွင့်တော်မူဘုရားအနီးတွင်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း၃၀ထက်မနည်းကတည်ရှိခဲ့ပြီးပြန်လည်မွမ်းမံထားရှိကာအမြင့်၃ပေခန့်ရှိအင်္ဂတေဖြင့်ထုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။”ရုပ်တုရဲ့အောက်ခြေမှာရေပိုက်ရှိတယ်လို့အရင်ဘုရားဝန်ထမ်းအချို့ကပြောတာရှိလို့ရုပ်တုတ်ဝန်းကျင်ကိုရှာကြည့်ပေမယ့်ရေပိုက်သွယ်တန်းထားမှုမတွေ့ရဘူး။ တကယ်လို့ရေပိုက်ကထွက်တယ်ဆိုလဲဘေးတွေပန်းထွက်ရမှာ။အောက်ကနေအပေါ်ကိုတက်သွားပြီးမှဆံပင်အဖျားကနေပြန်ကျဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ဘူး။ပြီးတော့ရုပ်တုနားမှာရေစင်တစ်ခုရှိတော့အဲဒီရေစင်ကလာတဲ့ပိုက်တွေထဲကနေများကျနိုင်သလားဆိုပြီးရေပိုက်ခေါင်းတွေပိတ်ကြည့်ပေမယ့်ရေစက်ကကျနေတုန်းပဲ။ရေစက်တွေကတောက်လျောက်ကျနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ရေစက်ရေပေါက်ကျတဲ့ပုံစံကအပေါ်ကနေအောက်ကိုဆံပင်အဖျားကနေရေစက်ချသလိုမျိုးတစ်စက်ချင်းကျနေတာ။ကျတဲ့ရေကဘာအမှုန်အမွှားမှမပါဘဲသန့်နေတာ။၁၅မိနစ်လောက်ကျလိုက်၂မိနစ်လောက်ရပ်သွားလိုက်။ပြီးတော့တစ်ခါပြန်ကျလိုက်ဖြစ်နေတာ။ရုပ်တုအပေါ်ပိုင်းမှာလည်းစိုနေတာမျိုးမရှိဘူး။ရေထွက်နိုင်လောက်တဲ့အပေါက်ရှိမလားဆိုပြီးသံချောင်းအသေးနဲ့ထိုးရှာသေးတယ်မတွေ့ရဘူး”ဟုဦးညွန့်မြိုင်ကဆက်လက်ပြောကြားသည်။ထို့ပြင်ရေစက်ရေပေါက်ကျကြောင်းတွေ့ရှိသည့်အချိန်နှင့်တိုက်ဆိုင်စွာမဟလောကရံသီအိမ်တော်ရာစေတီတေကြီး၏ငှက်မြတ်နားတော်နှင့်ဘုရားပရဝုဏ်အရှေ့မြောက်ထောင့်ရှိစလင်းမြို့စားမင်းသမီးတည်ထားခဲ့သောစေတီတော်၏စိန်ဖူးတော်တို့မှအလင်းတန်းများထွက်ပေါ်နေသည်ကိုဘုရားဝင်းပြင်ပရှိလူများနှင့်ဘုရားအတွင်းရှိဂေါပကအဖွဲ့ဝင်များ၊ဝန်ထမ်းများကဖူးတွေ့ခဲ့ရပြီးမှတ်တမ်းဗီဒီယိုရိုက်ကူးကာလူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင်တင်ထားကြောင်းလည်းသိရသည်။ ရေစက်ရေပေါက်များကျသည်ဆိုသည့်အတိတ်နိမိတ်သည်အေးချမ်းခြင်း၊ကြည်လင်သန့်ရှင်းခြင်းဟူသည့်သဘောကိုဆောင်သည့်အတွက်မန္တလေးမြို့အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံတော်တစ်ခုလုံးအေးချမ်းမည့်အတိတ်နိမိတ်အဖြစ်ယူဆကြောင်းလည်းပြောကြားသည်။ယင်းသို့ထူးခြားမှုများဖြစ်ပေါ်ရာသို့စေတီတော်ဩဝါဒါစရိယမြို့နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမိုးကောင်းတိုက်၊အလယ်ရွှေကျောင်းဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တဓမ္မဒီပတျာလင်္ကာရနှင့်စေတီတော်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်များ၊ဂေါပကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်လင်းအေး၊အတွင်းရေးမှူးဦးဝင်းအောင်၊တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးဦးအောင်နိုင်ဦးတို့နှင့်အဖွဲ့ဝင်များလာာက်၍ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့သည်။လက်ရှိအချိန်တွင်ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့၏ကိုဗစ်-၁၉ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးညွှန်ကြားချက်များအရဘုရားဝင်းအတွင်းသို့တာဝန်ရှိသူမှအပမည်သူ့ကိုမျှဝင်ခွင့်မပြုကြောင်းသိရသည်။(Ah Lin Nge) Zawgyiအိမ်တော်ရာစေတီတော်မြတ်ကြီးနှင့်အရံစေတီတို့မှအလင်းတန်းများထွက်ပေါ်ခြင်းနှင့်ဘုရားဝင်းအတွင်းရှိဝသုန္ဒြေနတ်ရုပ်တုမှရေစက်ရေပေါက်များကျခြင်းဖြစ်ပေါ်မန္တလေးမြို့၊ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊သီရိဟေမာအရှေ့ရပ်ကွက်၊၂၇x၂၈လမ်းကြား၊၈၈x၈၉လမ်းကြားရှိပုဂံမင်းတည်ထားကိုးကွယ်တော်မူခဲ့သောမဟာလောကရံသီအိမ်တော်ရာစေတီတော်မြတ်ကြီးနှင့်အရံစေတီတို့မှဒီဇင်ဘာလ၂၉ရက်နေ့(နတ်တော်လပြည့်နေ့)မွန်းလွဲပိုင်းကအလင်းတန်းများထွက်ပေါ်ခြင်း၊ဝသုန္ဒြေနတ်ရုပ်တု၏ဆံပင်အဖျားမှရေစက်ရေပေါက်ကျခြင်းများထူးခြားတိုက်ဆိုင်စွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ”ဂေါပကရုံးကလျှပ်စစ်အကူဝန်ထမ်းဦးရဲဝင်းအောင်ကထမင်းစားဖို့အိမ်ပြန်စဉ်မှာဝသုန္ဒြေနတ်ရုပ်တုအောက်ခြေမှာရေအိုင်နေလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာရုပ်တုရဲ့ဆံပင်အဖျားကနေရေစက်ရေပေါက်တွေအောက်ကိုကျနေတာစတင်တွေ့ရှိလို့ကျွန်တော့်ဆီအကြောင်းကြားပါတယ်။နောက်ပြီးဂေါပကအဖွဲ့ဥကကဋ္ဌကနေတဆင့်ဆရာတော်ကြီးများထံဆက်လက်လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်”ဟုဂေါပကအဖွဲ့ရုံးအဖွဲ့မှူးဦးညွန့်မြိုင်ကပြောကြားသည်။ ဆိုပါဝသုန္ဓြေရုပ်တုသည်ဘုရားဝင်းအတွင်းပွင့်တော်မူဘုရားအနီးတွင်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း၃၀ထက်မနည်းကတည်ရှိခဲ့ပြီးပြန်လည်မွမ်းမံထားရှိကာအမြင့်၃ပေခန့်ရှိအင်္ဂတေဖြင့်ထုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။”ရုပ်တုရဲ့အောက်ခြေမှာရေပိုက်ရှိတယ်လို့အရင်ဘုရားဝန်ထမ်းအချို့ကပြောတာရှိလို့ရုပ်တုပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှာကြည့်ပေမယ့်ရေပိုက်သွယ်တန်းထားမှုမတွေ့ရဘူး။တကယ်လို့ရေပိုက်ကထွက်တယ်ဆိုလဲဘေးတွေပန်းထွက်ရမှာ။အောက်ကနေအပေါ်ကိုတက်သွားပြီးမှဆံပင်အဖျားကနေပြန်ကျဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ဘူး။ပြီးတော့ရုပ်တုနားမှာရေစင်တစ်ခုရှိတော့အဲဒီရေစင်ကလာတဲ့ပိုက်တွေထဲကနေများကျနိုင်သလားဆိုပြီးရေပိုက်ခေါင်းတွေပိတ်ကြည့်ပေမယ့်ရေစက်ကကျနေတုန်းပဲ။ရေစက်တွေကတောက်လျောက်ကျနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ရစက်ရေပေါက်ကျတဲ့ပုံစံကအပေါ်ကနေအောက်ကိုဆံပင်အဖျားကနေရေစက်ချသလိုမျိုးတစ်စက်ချင်းကျနေတာ။ကျတဲ့ရေကဘာအမှုန်အမွှားမှမပါဘဲသန့်နေတာ။၁၅မိနစ်လောက်ကျလိုက်၂မိနစ်လောက်ရပ်သွားလိုက်။ပြီးတော့တစ်ခါပြန်ကျလိုက်ဖြစ်နေတာ။ရုပ်တုအပေါ်ပိုင်းမှာလည်းစိုနေတာမျိုးမရှိဘူး။ရေထွက်နိုင်လောက်တဲ့အပေါက်ရှိမလားဆိုပြီးသံချောင်းအသေးနဲ့ထိုးရှာသေးတယ်မတွေ့ရဘူး”ဟုဦးညွန့်မြိုင်ကဆက်လက်ပြောကြားသည်။ထို့ပြင်ရေစက်ရေပေါက်ကျကြောင်းတွေ့ရှိသည့်အချိန်နှင့်တိုက်ဆိုင်စွာမဟာလောကရံသီအိမ်တော်ရာစေတီတော်မြတ်ကြီး၏ငှက်မြတ်နားတော်နှင့်ဘုရားပရဝုဏ်အရှေ့မြောက်ထောင့်ရှိစလင်းမြို့စားမင်းသမီးတည်ထားခဲ့သောစေတီတော်၏စိန်ဖူးတော်တို့မှအလင်းတန်းများထွက်ပေါ်နေသည်ကိုဘုရားဝင်းပြင်ပရှိလူများနှင့်ဘုရားအတွင်းရှိဂေါပကအဖွဲ့ဝင်များ၊ဝန်ထမ်းများကဖူးတွေ့ခဲ့ရပြီးမှတ်တမ်းဗီဒီယိုရိုက်ကူးကာလူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင်တင်ထားကြောင်းလည်းသိရသည်။ရေစက်ရေပေါက်များကျသည်ဆိုသည့်အတိတ်နိမိတ်သည်အေးချမ်းခြင်း၊ကြည်လင်သန့်ရှင်းခြင်းဟူသည့်သဘောကိုဆောင်သည့်အတွက်မန္တလေးမြို့အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံတော်တစ်ခုလုံးအေးချမ်းမည့်အတိတ်နိမိတ်အဖြစ်ယူဆကြောင်းလည်းပြောကြားသည်။ ယင်းသို့ထူးခြားမှုများဖြစ်ပေါ်ရာသို့စေတီတော်ဩဝါဒါစရိယမြို့နယ်သံဃနာယကအ့ဥက္ကဋ္ဌမိုးကောင်းတိုက်၊အလယ်ရွှေကျောင်းဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တဓမ္မဒီပတျာလင်္ကာရနှင့်စေတီတော်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်များ၊ဂေါပကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်လင်းအေး၊အတွင်းရေးမှူးဦးဝင်းအောင်၊တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးဦးအောင်နိုင်ဦးတို့နှင့်အဖွဲ့ဝင်များလာရောက်၍ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင်ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့၏ကိုဗစ်-၁၉ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးညွှန်ကြားချက်များအရဘုရားဝင်းအတွင်းသို့တာဝန်ရှိသူမှအပမည်သူ့ကိုမျှဝင်ခွင့်မပြုကြောင်းသိရသည်။(Ah Lin Nge)
ပွညျသူတှရေဲ့ဒဏျခကျခွငျးကို အကွီးအကယြျခံလိုကျရတဲ့ အလှမယျနှဈဦးအသိပေးကွညောခကြျယှနျးဝင့ျလှှာအောငျ ” Miss Now How 2017 နှင့ျ ” ရှှရေူပါဦး ” Miss Equal Myanmar 2019 တို့ ( ၂) ဦးအားMissosology နှင့ျ Missosology Myanmar Organization တို့မှရာသကျပနျ တရားဝငျ ပိတျပငျသှားပွီဖွဈပါကွောငျး အသိပေးအပျပါသညျ ။ယနေ့ အာဏာသိမျး စဈအုပျစုကို ထောကျခံတဲ့အထဲမှာ အလှမယျ၊ အလှမယျ ဆိုပွီး post တှေ တကျလာပါတယျ…အလှမယျ ဟု သူတို့သဘောနှင့ျသူတို့ ခေါငျးစဉျတပျတိုငျး မယုံကွပါရနျ မိဘပွညျသူမြားကို အသိပေးခငြျပါတယျ…ထို့ပွငျ (ဆုရခဲ့ဖူးသညျ ဖွဈစေ၊ နိုငျငံတကာပွိုငျပှဲပွိုငျခဲ့ဖူးသညျ ဖွဈစေ)အလှမယျ ခေါငျးစဉျတပျထားပွီး လူမိုကျ အားပေးလုပျနသေူမြားနှင့ျမိမိနှင့ျမဆိုငျသလို နှုတျဆိတျနကွေသူမြားကိုလညျး အပွငျးအထနျ ရှုတျခပြါတယျ…ယခုကဲ့သို့ အခွအေနတှေငျ […]
မိန်းကလေးတွေ ဖတ်ပေးကြပါ အရေးကြုံရင် အသုံးဝင်ပါတယ် Self defense tip နည်းနည်းပေးပါ့မယ်။ ဒီနည်းတွေသုံးဖို့ အားကောင်းဖို့မလိုပါဘူး။ ——- 1. လက်သီးနဲ့ မေးစေ့/ပါးကို မထိုးပါနဲ့။ လက်သီးမဆုပ်တတ်ရင် လက်ကျိုးတတ်ပါတယ်။ လက်ချောင်းကြားထဲ သော့ထည့်ဆုပ်တာမျိုးလည်း မလုပ်သင့်ပါဘူး။ 2. လက်ထဲက တခုခုကို ကိုင်မယ်ထုမယ်ဆို လက်သီးဆုပ်ပြီးကိုင်ပါ။ (လှံပစ်ရင် လှံကိုကိုင်တဲ့ပုံမျိုး) 3. နောက်တခုက လက်သီးဆုပ်နည်းပါ။ —— လက်မကို အပြင်ထုတ်ပြီး ဆုပ်ရပါတယ်။ လက်သီးဆုပ်ပြီး လက်ကောက်ဝတ်နဲ့ တစ်တန်းတည်းထားရပါတယ်။ လက်သီးဆုပ်ရင် လက်ချောင်းလေးတွေ ညီနေရပါ့မယ်။ လက်ညိုးလက်ခလယ်က ကြွနေရင် ကျိုးတတ်တာမို့ လက်သူကြွယ်နဲ့ လက်သန်းကိုပါ အပေါ်နည်းနည်းမြှောက်ပြီး ညီနေအောင်ထားပါ။ အဲ့လို လက်ဆစ်ညီညီ ထိုးလိုက်တဲ့အခါ လက်ဆစ်လေးခုလုံးက ပစ်မှတ်အပေါ်ကျသွားတာမို့ ထိတဲ့လူပိုနာပါတယ်။ ——- 4. […]
အပြောနဲ့မဟုတ်ပဲ အလုပ်နဲ့သက်သေပြသွားတဲ့ မုံရွာလူထုကြီးရဲ့ ညီညွတ်မှု လေမဟုတ် အလုပ်နဲ့ သက်သေပြတဲ့ မုံရွာဟ သာဝရ မုံရွာက ညီတယ် မုံရွာသားတွေက သွေးရဲတယ် ကရိန်းကားနဲ့ ဘောက်တွေချိတ် ယာယီစင်မြင့် ဆောက် လူအင်းအား သိန်းချီတော့ LED ဘုတ် နဲ့ ထိုးပြ လူထုညီလာခံ သိပ်သပ်ရပ်တယ်… ကားတွေရင်းတယ်၊ အသံချဲ့စက်တွေရင်းတယ်၊ LED Board တွေရင်းတယ် ၊ ကင်မရာတွေ switcher တွေရင်တယ်… ဒီပစ္စည်းတွေက လမ်းဘေးအရုပ်ဝယ်သလို ၅၀၊ ၁၀၀ နဲ့ဝယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး… အရင်းအနှီး သိပ်ကြီးတယ်… ဒါပေမယ့် မုံရွာသားတွေ ချရဲတယ်၊ ရင်းရဲတယ်… သူတို့တွေရဲ့ ပံ့ပိုးမှု၊ မုံရွာနယ်တစ်ကြောက လူထုရဲ့ ညီညွတ်မှု… သိပ်မိုက်သဗျို့ … အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်… စစ်အာဏာရှင် […]
Gen X ရဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ရင်ကျက်မှုတွေကို ကောင်းကောင်းအသုံးချခဲ့တဲ့ ဦးဇင်ဝိုင်းရဲ့ လုပ်ရပ် မြန်မာပလာဇာမှာ ဆန္ဒပြလူငယ်တွေနဲ့ ရဲတွေကြား အနုပညာရှင် ဦးဇင်ဝိုင်းက ဝင်ရောက်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ “အခုဆန္ဒပြနေတဲ့ လူငယ်တွေက အကြမ်းဖက်သမားတစ်ယောက်မှမပါပါဘူး ဘာလက်နက်မှလဲ မပါပါဘူး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတာပါရဲမှုးတို့ဘက်ကလဲ ဆောင်ရွက်ရမယ့် ဝတ္တရားရှိတယ်ဆိုတာသိပါတယ်”ဆိုပြီး မြန်မာပလာဇာမှာ လူငယ်တွေနဲ့ ရဲတွေကြား ဝင်ရောက်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ လူငယ်တွေကိုလဲ “ ဓါးတွေ ဒုတ်တွေပါလား မပါဘူးနော် အားလုံးမှာ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်တဲ့ အမှန်တရားပဲပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကြောက်စရာလဲ မလိုဘူး ထိပ်တိုက်တွေ့စရာလဲ မလိုဘူး အကြမ်းဖက်တာငါတို့မလုပ် လုပ်ရင် ငါတို့မဟုတ် အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်”ဆိုပြီး လူငယ်တွေကိုလဲ ဦးဇင်ဝိုင်းက အားပေးစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ Crd ; Photo Yangon Nation Gen X ရဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ရင်ကျက်မှုတွေကို […]
ဦးကျော်မိုးထွန်းကို နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်လို့ စစ်ကောင်စီကြေညာ ~~~~ ■
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်မိုးထွန်းကို နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်သူလို့ဒီကနေ့ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ကိုသစ္စာဖောက်ပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့် အလွှဲသုံးစား လုပ်ခဲ့တာကြောင့် ဒီနေ့ကစပြီး ဝန်ထမ်းအဖြစ်ကနေ ထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်း အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ နိုင်ငံပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားကနေ ကြေညာသွားတာပါ။ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကို အပြင်းထန်ဆုံး အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်မိုးထွန်းက ဖေ‌ဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်နေ့က တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ ———— ဦးကျော်မိုးထွန်းကို နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်သူလို့ စစ်ကောင်စီကြေညာ ~~~~ ■ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်မိုးထွန်းကို နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်သူလို့ဒီကနေ့ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ကိုသစ္စာဖောက်ပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့် အလွှဲသုံးစား လုပ်ခဲ့တာကြောင့် ဒီနေ့ကစပြီး ဝန်ထမ်းအဖြစ်ကနေ ထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်း အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ နိုင်ငံပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားကနေ ကြေညာသွားတာပါ။ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ […]
စာဖတျသူ အပေါငျး သူတောျကောငျးတို့ ခငျဗြာ …သတငျးထူး တဈပုဒျပွောပွခငြျပါတယျ …ဒါကတြာ့ သရုပျဆောငျ မငျးမောျကှနျဟာမွဝတီ ရုပျမွငျသံကွားနှင့ျ MRTV တို့ကို ပွငျးထနျစှာ သတိပေးလိုကျတဲ့ သတငျးပဲ ဖွဈပါတယျမွဝတီ ရုပျမွငျသံကွားနှင့ျ MRTV မှာ မငျးမောျကှနျး ပါဝငျသရုပျတောငျထားတဲ့ဇာတျကားတှကေို အခါသင့ျသလို ထုတျလှှငျခံရတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျပါမငျးမောျကှနျးဟာ အာဏာရှငျ တောျလှနျရေးမှာ ပွညျသူတဈယောကျရဲ့တာဝနျကို ကြပွှေနျစှာ ထမျးဆောငျနတေဲ့ အနုပညာ ရှငျတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ …မငျးမောျကှနျးဟာ မြိုးရိုးလိုကျတယျလို့ ဆိုရမလားမသိ …သူ့ဖဖေေ ဦးဇငျဝိုငျးဟာလဲ ၈၈ အရေးခငျးမှာ ပါဝငျခဲ့သလိုအခု အာဏာရှငျဆန့ျကငြ့ျမှု့မှာလဲ အသကျကွီးပမေယ့ျ လူငယျတယောကျလို တိုကျပှဲဝငျဆဲဖွဈပါတယျ …မငျးမောျကှနျးဟာ စဈတပျမှ အာဏာရယူခဲ့တဲ့ အခြိနျမှစပွီးယနေ့ထိ မွပွေငျမှာရော လိုငျးပေါျမှာပါ အာဏာရှငျကို တောျလှနျနခေဲ့တာပါ …စဈတပျအာဏာ ရယူခြိနျမှ စပွီး […]
“မေမေ့ကို မထိနဲ့နော်” ဒုညွှန်မှူးရဲ့ ဇနီးကို စစ်မေးစရာရှိသည်ဟုပြော၍ အတင်းဝင်ရောက် ဆွဲခေါ်သည့်မှတ်တမ်း(ရုပ်သံ)
မေမေ့ကို မထိနဲ့နော် သားမေမေ့ကို ဆုံးရှုံးရမှာကြောက်လွန်းလို့ စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ ရှိုက်ငင်တောင်းပန်သံတွေကို လျစ်လျူရှုနေကြမှန်း သိပါတယ် မေမေ့ကို မထိနဲ့နော် သားကငယ်သေးတော့ လူကြီးတွေလို စကားလုံးတွေအများကြီးမပြောတတ်၊ မစဉ်းစားတတ်သေးပေမဲ့ လုံခြုံတဲ့မေမေ့ရင်ခွင်ကနေခွဲခွာရတော့မှာကိုတော့ သိနေပါပြီ မေမေ့ကို မထိနဲ့နော် သားမေမေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်တိုင်း သားရဲ့အပြစ်မရှိဖြူစင်တဲ့ ငယ်ဘဝမှာ စိတ်ဒါဏ်ရာတွေဖြစ်သွားတာ ကိုယ်ချင်းစာပေးပါဦးဗျာ မေမေ့ကို မထိနဲ့နော် သားမေမေမှာဘာခုခံကာကွယ်စရာမှမရှိပေမဲ့ သားသမီးတွေအတွက်တော့ ကြင်နာတတ်တဲ့ နှလုံးသားနဲ့ လက်တစ်စုံရှိပါသေးတယ် မေမေ့ကို မထိနဲ့နော် သားမေမေသင်ပေးထားတာ အမှန်တရားနဲ့လူတစ်ယောက်က ရဲရဲရင့်ရင့်နဲ့သတ္တိရှိရမယ်တဲ့ မေမေ့ကို မထိနဲ့နော် သားမေမေပြောပြဖူးတယ် လောကမှာအရေးအကြီးဆုံးက အမှားနဲ့အမှန်ကိုခွဲခြားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာတဲ့ မေမေ့ကို မထိနဲ့နော် မိဘချင်းသားသမီးချင်းကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေးထားပြီး သားတို့ရဲ့မိသားစုလေးကိုမဖျက်ဆီးလိုက်ပါနဲ့ဗျာ မေမေ့က လူကောင်းပါ သားကိုမေမေပြောပြဖူးတာ လူဆိုးကြီးတွေကပဲဖမ်းခံရတာတဲ့ သားမေမေက သူများကိုနာကျင်အောင်လုပ်ဖို့နေနေ သားကိုတောင်လက်နဲ့ တစ်ခါမှမရွယ်ဖူးပါဘူးဗျာကျေးဇူးပြုပြီး မေမေ့ကို မဖမ်းသွားပါနဲ့နော် သား […]
သတင်းထောက်တွေ ရဲ့ သတင်းယူုခြင်း နည်းပညာတွေထဲ မှာ တစ်ခါ တလေ လူချပြီး ရင်းရတာတွေရှိတယ်
သတင်းထောက်တွေ ရဲ့ သတင်းယူုခြင်း နည်းပညာတွေထဲ မှာ တစ်ခါ တလေ လူချပြီး ရင်းရတာတွေရှိတယ် ဂျပန်သတင်းထောက် က ကမ္ဘာကိုချပြဖို့ အဖမ်း ခံရချိန်နိုင်ငံခြားသားမှန်းသိမှာစိုးလို့ စကားတခွန်းမှမပြောဘူးလမ်းမှာ ထုတယ် ထောင်းတယ် ကန်တယ် ရိုက်တယ် ပေခံတယ် နောက် မှ ဂျပန် မှန်းသိတော့ လက်လွန်နေပြီ အမြန်ပြန်လွှတ်ပေး လည်း သူတိုယုတ်မာတာတွေ ကမ္ဘာကို ချပြနိုင်ပြ သွားနိုင်ပြီ သတင်းထောက် ဆိုတာ အဲ့ဒါဘဲ ။ Crd – Swe Naing Siss